४९ वर्षकी अविवाहित एलिजाबेथको ब्वायफ्रेण्डसँगबाट एउटा छोरा, कोहीपनि चित्त नबुझेपछि कुकुरसँग बिहे (भिडियो)पुरा हेर्न फोटो मा किलिक गर्नु होला 👇👇 - UflyRadio
Homeरोचक४९ वर्षकी अविवाहित एलिजाबेथको ब्वायफ्रेण्डसँगबाट एउटा छोरा, कोहीपनि चित्त नबुझेपछि कुकुरसँग बिहे (भिडियो)पुरा हेर्न फोटो मा किलिक गर्नु होला 👇👇
कोही मानिसका आकांक्षाहरु विचित्रकै हुन्छन् । अहिले एकजना ४९ वर्षकी महिलाको बिहेको कहानी निकै चर्चित बनेको छ ।पूर्व स्विमसूट मोडेल एलिजाबेथ होडले आफ्नै कुकुरसँग बिहे गरेकी छिन् । उनको कुकुर लोग्नेको उमेर ६ वर्षको छ ।उनको बिहे समारोह विश्वका लाखौँ मानिसले हेर्न पाए । किनकि उनको बिहेलाई बेलायतको चर्चित टेलिभिजन शो द मर्निङ्गमा लाइभ प्रशारण गरिएको थियो ।
रोचक त के भने कुकुरसँग बिहे गर्नुअघि अविवाहित नै रहेकी एलिजाबेथको एकजना ब्वायफ्रेण्डसँगबाट एउटा छोरा पनि छ । उक्त छोराको उमेर नै २५ वर्ष पुगिसकेको छ । अब आफूलाई कुनै पनि पुरुषको आवश्यकता नरहेको भन्दै उनले कुकुरसँग बाँकी जिवन बिताउने बताएकी छिन् ।द मर्निङ्गले आफ्नो आधिकारिक ट्वीटर अकाउन्टमा एलिजाबेथको बिहेको भिडियो शेयर गरेको छ । जसलाई अहिलेसम्म लाखौँले हेरिसकेका छन् ।
सात दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ बिल्कुलै बेवास्ता नगर्नुहोला, देखेर पनि नदेखेको जस्तो नगर्नु होला ॐ लेखेर एक share गर्नुस अधुरो काम बन्नेछ।! भिडियो हेर्नुहोस !
किशोरीले ढोका बन्द गरी यस्तो गर्दै थिइन, जब ममी आइपुगिन त्यसपछि जे भयो (भिडियो सहित) पुरा हेर्न फोटो मा किलिक गर्नु होला 👇👇